Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay xubno Shabaab ahaa (SAWIRRO) | Universal Somali TV
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay xubno Shabaab ahaa (SAWIRRO)
Cabduqaadir Suufi Muunye & Saciid Cumar Cabbdullaahi ayaa loo heystaa kamid ahaanshiyaha Alshabaab iyo in ay ahaayeen u qaabilsanayaaal xagga maamulka iyo maaliyadda uga wakiil ah Alshabaab Tuulada Mareerey oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobalka Shabeellada Hoose.
Cabduqaadir oo magiciisa afgarashadu yahay Amiir Gaabbow ayaa laga soo qabtay degmada Dharkeenley ee gobalka Banaadir sideedii October sanadkii ina dhaaafay halka Saciid oo magiciisa afgarashadu yahay Macallim Saciid laga soo qabtay xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda 29-kii September Sanadkii hore.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa Shantii November codsaday in labada eedeysane loo dhaa dhiciyo xabsiga dhexe gar-suge ahaan, waxa ayna markale baaritaan dheer kadib codsadeen in la muddeeyo dhageysiga dacwadda 21-ka January sanadkan.
Qareenka eedeysanaha ayaa Maxkamadda weydiistay in loo fududeeyo xukunka maadaama uu eedeysanaha kaliya ku sinaa sii deynta dhacda maalmeedka suuqa sida isagaba uu qirtay.
Ragga xukunka lagu riday ayaa waxa ay qaadan karaan Racfaan.
Kan-xigaTaliyihii Saldhiga Wadajira oo si ked...
Kan-horeNabadoon Cabdiraxmaan Geesdiir oo caa...
52,000,458 unique visits